काठमाडौं । ठूलो भएपछि यस्तो व्यवसाय गर्छु, उस्तो काम गर्छु भन्ने सोचेर सानै उमेरमा रमाउनेहरू हामीले धेरै भेट्छौं । तर, कहिले कुनै कामको अनुभव नै नबटुली एकैचोटि व्यवसाय शुरू गरेर रातारात सफलता पाउनेहरू कति होलान् ? पक्कै पनि थोरै नै होलान् । विज्ञापन एजेन्सीमा काम गरेर आफ्नै विज्ञापन कम्पनी खोल्ने, क...
नवराज शिवाकोटी जेठ ९, दोलखा । दोलखाका १ हजार १९२ जना बेरोजगारलाई सरकारले रोजगारी दिने भएको छ । संघीय सरकारले घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृतमध्येबाट यी युवाले ३० दिनको रोजगारी पाउने छन् । यहाँका ९ स्थानीय तहका करीब ३५ हजार युवा बेरोजगारीको सूचीमा सूचीकृत...
काठमाडौं । जागीरमा पदोन्नति होस्, वर्षैपिच्छे तलब बढिरहोस् भन्ने चाहना हरेक मानिसमा हुन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो । तर, कहिलेकाहीँ कयौं वर्षसम्म पनि तलब बढ्दैन । पदोन्नति पनि हुँदैन । यस्तो किन भइरहेको छ, तपाईंले यसबारे कहिल्यै विचार गर्नुभएको छ ? यसका विविध कारण हुन सक्छन् । यसमध्ये केही कारण तल दिइए...
भक्तबहादुर शाही नेपालगञ्ज । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बाँकेमा करीब २ हजार बेरोजगारले रोजगारी पाउने भएका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिल्लाका स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्रअनुसार बेरोजगारी सूचीमा दर्ता भएकामध्ये १ हजार ८३२ जनालाई ३० दिनबराबरको रोजगारी दिन लागिएको हो । सरकारले च...
वीरेन्द्रनगर । महीनाभर मेहनत गरेर लगाएको खेतीले खान पुग्दैनथ्यो । आम्दानीको अन्य कुनै स्रोत थिएन । गाउँघरमा अरूको काम गर्दा मेहनतअनुसार ज्याला नपाउने समस्या । त्यसैले वीरेन्द्रनगर–२ कोलडाँडाका कालीबहादुर अधिकारीलाई घरखर्च चलाउन मुग्लान जानैपर्ने बाध्यता थियो । अधिकारी १२ महीनामा २ महीना (दशैं–तिहार...
मदन गिरी महेन्द्रनगर । चालू आव २०७५/७६ भित्र कञ्चनपुरका १ हजार ८६४ जनाले रोजगारी पाउने भएका छन् । स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बेरोजगारको सूचीमा दर्ता भएका जिल्लाका उक्त संख्याका युवालाई ३० दिनबराबरको रोजगारी दिने भएको हो । सरकारले चालू वर्षको बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री र...
खोटाङ । बेरोजगार युवालाई आफ्नै देशमा स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले खोटाङको रावाबेँशी गाउँपालिकामा सवारी चालकसम्बन्धी तालीम शुरू गरिएको छ । गाउँपालिकाका ३० बेरोजगार युवालाई सवारीसाधन चलाउन सिकाएर स्वरोजगार बन्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले एकमहीने तालीम शुरू गरिएको हो । गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा कान्...
काठमाडौं । हप्ताका ६ दिन काम गरेर शनिवार बिदामा बस्ने नेपालीहरू धेरै छन् । सातै दिन काम हुने अफिसमा कसैलाई शनिवार, कसैलाई आइतवार, कसैलाई सोमवार गरेर विदा दिने चलन पनि छ । अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालगायत केही संस्थाले शनिवार र आइतवार गरेर हप्तामा २ दिन पनि बिदा दिँदै आएका छन् । तपाईंले अहिले काम...